Haddii aadan deyn iska bixin waxaa lagu saari karaa calaamad ah in aadan lacagaha iska bixin | Kronofogden
Haddii aadan deyn iska bixin waxaa lagu saari karaa calaamad ah in aadan lacagaha iska bixin – ama waa lagu calaameynayaa sida badanaa loogu yeeraba. Cidda ku shaqada leh calaameynta dadku waa shirkadaha deyn bixiyayaasha macluumaadka siiya. Sidoo kalana waa iyaga cidda aad la xiriireysid haddii aad su’aalo ka qabtid waxa keenay in lagu calaameeyay.
Maxay tahay sababta laguugu saari karo calaamad ah in aadan lacagaha iska?
Marka laguugu leeyahay deyn aadan bixineyn waxay cidda deynka kugu lihi caawimaad weydiisan kartaa Kronofogden. Ka dibna waxaa deynkaaga lagu qorayaa diiwaankeenna. Markaas waxaa macluumaadkaas heli kara shirkadaha deymanka ka warbixiya, taasina waxay ka dhigantahay in lagu saaray calaamad ah in aadan lacagaha iska bixin.
Marka laga hadlayo dadka shacabka ah ee aan ganacsatada ahayn, kama gudbineyno macluumaad xagga deynta ah oo ku aaddan kiisas guud, waxaan taas loola jeednaa deymanka khuseeya tusaale ahaan canshuur aan la bixin, ganaax ama lacagta uu bixiyo waalidka aysan carruurtu la degganeyn, ilaa inta laga dhaafayo waqtigii lacagta la bixin lahaa (waqtigi ogeysiinta) ee markaasna aan weli la bixin lacagta. Waxay taasi ka dhigantahay in dadka shacabka ahi ay haystaan laba usbuuc in ay lacagta isaga bixiyaan inta tusaale ahaan deyn canshuureed uusan keenin in qofka la calaameeyo.
Sideed ku ogaaneysaa in calaamad lagu saaray?
Si fudud ayaad ku ogaan kartaa in calaamad lagu saaray adigoo la xiriiraya shirkadaha macluumaadka siiya deyn bixiyayaasha.
Annagu kama jawaabi karno su’aalo ku aaddan calaamad ah in aadan lacagaha iska bixin. Taasna waxaa sabab u ah in calaamadeynta lacag iska bixin-la’aanta ay keeni karaan dhacdooyin aysan Kronofogden wax shaqo ah ku lahayn.
Yaa qofka ka tirtiraya calaamadda?
Waa shirkadaha ka tala bixiya deymanka kuwa calaamadda kaa tirtiri kara.
Macluumaad la xiriir: